Naphezu kweqiniso lokuthi amazambane athosiwe ne ubhekeni isidlo okunomsoco kakhulu futhi kwanelise, ayo efana cishe bonke abantu. Kufanele kuphawulwe ukuthi ekulungiseleleni sasemini enjalo elula Ukraine akukho inkinga. Kwenze ekhaya uzokwazi wonke umuntu.
amazambane athosiwe ne ubhekeni: iresiphi
Kubhekwe isidlo kuthandwa kakhulu, hhayi nje kuphela ezweni lethu kodwa futhi kuwo wonke amazwe CIS. Lokhu idina livela Ukrainian, kanye izindlela ezahlukene ngokuphelele.
Ngakho lokho ukudla esikudingayo ukuze senze ukudla okwehl 'esiphundu futhi kwanelise amazambane is ethosiwe ne ubhekeni? Ukuze wenze lokhu, Thenga:
amazambane nezilimo eziyizigaxa Usayizi medium - 5 PC.
ezivamile usawoti esihle - mayelana 1/2 Art. l.
ubhekeni usawoti - mayelana '80
Ukulungiselela izingxenye (amanoni amazambane)
amazambane athosiwe ne ubhekeni ekulungiseleleni lilula. Kodwa ngaphambi kokuqhubeka ekwelapheni ezishisayo izithako ngenhla, kufanele belashwe ngokulandelana. Okokuqala sidinga ukuhlanza nezilimo eziyizigaxa amazambane. Kokwenekela kubo ngezindlela ezihlukahlukene. Othile ukusika tincetu nezilimo eziyizigaxa, futhi othile - simunyangaso.
Ngokuphathelene usawoti fat ke usawoti ngokweqile isuswa ke wageza. Ngokulandelayo, ucezu nesinqumela womile nge amathawula iphepha kanye uhlakaze izingcezu maphakathi.
Inqubo ukupheka ukudla phezu kwesitofu
amazambane athosiwe ne ubhekeni lizwakale kangcono uma ukupheka in a deep cast iron Skillet. Ukuze wenze lokhu, wafaka le isidlo phezu ukushisa eliphezulu, bese babeka izingcezu ingulube fat.
Ncibilikisa amafutha kufanele kube nje it is hhayi siguqulelwa cracklings crispy. Uma onke amanoni kuyophuma bayigubungele phansi pan, cracklings ohlanzekile ipuleti ehlukile. Ngesikhathi esifanayo in the pan wavutha nesinqumela encibilikisiwe kwanda amazambane. Ngaphandle kokuphazamisa, yena waba ngokushesha embozwe ngesivalo. Kuleli fomu, okuthosiwe imifino on ukushisa high cishe imizuzu engu-4. Ngemva kwalokho ukugxambukela bese uqhubeke upheke elinye imizuzu 5.
Njengoba isikhathi sihamba, amazambane usawoti ngendlela esilindele yakho. Hlanganisa umkhiqizo, it is ethosiwe esicishe 10 imizuzu, kodwa ukushisa ongaphakeme.
Uma amazambane ngesisa, kwanezelwa cracklings ngaphambilini walungisa. Nalapha futhi, ukuxuba izithako, basuke isuswe ukushisa bese uvula isivalo (imifino steamed).
Khonza amazambane nge ubhekeni etafuleni
amazambane athosiwe ne ubhekeni epanini ukuthosa - a okunama-kilojoule amaningi futhi isidlo enempilo kakhulu. Ngakho-ke, ukusebenzisa ngokuvamile kakhulu is hhayi Kunconywa. I apheke ukudla kwakusihlwa anakekele umkhaya wakhe, ukusabalala yakhe evuthayo ku-ipuleti ufafaze fresh amakhambi oqoshiwe. Khonza chips etafuleni, kanye nesinkwa kanye ukhukhamba okuzenzela.
Step by step recipe for amazambane athosiwe ne ubhekeni kanye anyanisi
Zonke ongakhetha kubhekwe ukupheka ukudla kwakusihlwa, zifana kakhulu nomunye. Nokho, chef ngamunye, uncamela ukusebenzisa iresiphi ethize.
Indlela elula ukwakha ukudla okumnandi okuphekwe ekhaya yethulwa ngenhla. Uma ufuna ukudla flavorful ngaphezulu, kutuswa ukusebenzisa iresiphi. Ukuze nokuqaliswa kwalo uzodinga ukuthenga:
Potato nezilimo eziyizigaxa Usayizi medium - 5 PC.
esihle ithebula usawoti - nezinkezo enkulu mayelana 1/2;
nesinqumela usawoti - mayelana 80 g;
anyanisi - 2 amakhanda ezinkulu;
onion eluhlaza, dill fresh - ku ugongolo isilinganiso;
amafutha sunflower - ngokuzikhethela.
okulungisa ukudla (owandulelayo)
amazambane athosiwe ne ubhekeni, iphekwé leresiphi, kuyinto ukunconywa ngaphezulu, flavorful futhi okumnandi. Ngaphambi kokwenza ukudla, nezilimo eziyizigaxa, imifino sihlanza tincetu oqoshiwe ke zisakazwa ithawula ehlanzekile omisiwe ngokuphelele. Ngemva kwalokho, lungiselela bese anyanisi. It is uthathe izindandatho uhhafu. Ngokuqondene imifino ke nquma it fake ngommese. Salo for izitsha ezinjalo thatha Kancane ngabhema. It zihlanjululwa kusukela isinongo ngokweqile kanye oqoshiwe zibe cubes.
Inqubo ukuthosa phezu ukudla isitofu caloric
Izithombe amazambane athosiwe ne ubhekeni, ungabona kulesi sihloko. Ukuze silungiselele lokhu dish a Skillet sensimbi kakhulu ukufuthelana phezu kwesitofu. Khona-ke wanezela amafutha sunflower (nezinkezo mayelana 5 esikhulu). Ngemva kwalokho, endishini uthele wonke amazambane zangaphambi ngayo. Ngaphandle kwaphazamiseka imifino, basuke uvalwe embozwe ngesivalo futhi sipheke ukushisa eliphezulu cishe ezintathu imizuzu.
Ngemva kwesikhathi esithile, engeza kuya amazambane ngabhema ubhekeni. Hlanganisa umkhiqizo, futhi embozwe ngesivalo, futhi ukuthosa ezingeni lokushisa eliphezulu cishe imizuzu engu-5. Phakathi nalesi sikhathi, izithako kufanele kancane kuphekeke. Uma unomuzwa wokuthi amazambane iba ezithambile, kufanele ubeke lokho inxenye amasongo onion. Ngaphandle kokuphazamisa izingxenye, bayaqhubeka ukupheka phezu ukushisa low cishe imizuzu engu-2. Ngaphezu kwalokho usawoti kanye pepper ukunambitha. Ngesikhathi esifanayo ngakho ziphazamisa spatula lokhuni.
Uma amazambane zithambile ngokuphelele, lasakazekela oqoshiwe anyanisi oluhlaza kanye dill fresh. Ngenxa yalokho, isidlo kugcinwa ashisa ongaphakeme cishe amabili imizuzu ke asuswe ipuleti bese uvula isivalo. Govuza imifino nge nesinqumela nemifino ngu ikhaba, basuke enikeziwe etafuleni.
Khonza amazambane athosiwe anyanisi, amakhambi ubhekeni kumele kube nje kushisa. Ukuze wenze lokhu, ukusabalalisa isidlo esiphelele phezu kwezitsha. Uma kudingekile, kungenzeka ukuze aqhube ukunambitheka izinongo elimnandi, bese wengeza inani elincane ukhilimu fresh.
Ready ukudla kwasemini, kuyinto efiselekayo kanye ucezu lwesinkwa kanye ukhukhamba ezifana pickled utamatisi, ukhukhamba noma neklabishi. Bon appétit!
izazi eziningi enqabela ukudla izitsha ezifana amazambane athosiwe, ikakhulukazi nge ubhekeni. Kodwa ngezinye izikhathi yena ufuna etotoswayo futhi kwasemini esiphundu akusizi kakhulu. Kulokhu, sinikeza ukukwenza njengoba kuchaziwe ngenhla.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngaphezu chips, ungakwazi ukwengeza ubhekeni kanye nezinye izithako. Phakathi kwabo kukhona izinto ethandwa kakhulu ezifana ayi, ham, amasosishi nokuningi. Konke kuncike umcabango umpheki.
Analogue "Essentiale Forte" engabizi. Yini esikhundleni imithi?
Gel "Izotreksin": imfundo, analogs kanye nokubuyekeza